Golaha PCB Warshadaha - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCB Warshadaha Iyo Golaha - PCBFuture
Keyword: iskuxirka PCB, waxsoosaarka PCB iyo isku imaatinka, awooda PCBA
PCBFuture waxay leedahay nidaam tayo leh oo tayo leh iyo dhammaan shahaadooyinka sida TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, iwm. PCB, waxaan u leenahay Flying Probe Test iyo E-Testing. Wixii PCBA, waxaan leenahay IQC, AOI, Function Test, QA. Kuwani waa arrimo aasaasi ah laakiin aad muhiim ugu ah warshadaha PCB.
Sida ugu caansan shirkadaha isku xidhka elektarooniga Shiinaha, waxaan bixinaynay xalal wax soo saar elektaroonig ah oo buuxa 10 sano si loo daboolo baahiyaha suuqa Shiinaha.
Waxaan leenahay macaamiil ka socda warshado kala duwan xagga qiimaha-oolnimada, tayada, gaarsiinta iyo wixii kale ee looga baahan yahay. Laga soo bilaabo qaabka PCB-ka ee loo yaqaan 'PCB prototyping', wax soo saarka ballaaran, ka dibna isku imaatinka PCB, adeegyada sanduuqa elektaroonigga ah, guddiyadayada wareegga ah ee daabacan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa robotikada, caafimaadka, baabuurta, isgaarsiinta, warshadaha iyo alaabada elektaroonigga ah.
Waxaan ku hawlan nahay ganacsiyada soo socda: PCB jilicsan, PCB-ga caadada u ah, PCB noocooda ah, isku-dhafka PCB-ga, shirarka PCB-yada elektaroonigga ah, urur yar oo PCB ah, iwm.
Maxaad u dooratay wax soosaarkayaga PCB iyo shirkii:
1.Si aad u sarreysa oo sax ah iyo saxsanaanta-Noocyadeenu waa kuwo aad ugu fiican saxsanaanta waxayna la kulmi karaan qeexitaanka macaamiisha. Tani waa sababta oo ah waxaan u qaadannaa tayada iyo faahfaahinta si dhab ah.
2.Degasho deg deg ah - waxaan fahamsanahay qiimaha waqtiga macaamiisha. Sidaa darteed, waxaan ku dadaalnaa inaan ku soo saarno noocaaga nooc xawaare macquul ah. Sidaa darteed, adeeggayaga isku-darka ah ee nooca PCB-ga ah wuxuu gaabin karaa waqtigaaga sugitaanka dhowr toddobaad illaa daqiiqado yar.
3.Sicirada aadka u hooseeya-waxaan leenahay qaab dhameystiran oo kaa caawinaya inaad qiimayaasha hoos u dhigto oo aad awoodi karto. Sidaa darteed, waxaan ku dhameystiri doonnaa mashruucaaga miisaaniyad macquul ah.
Saxitaanka qaladka-Nooca PCB-ga waa mid aad muhiim u ah helitaanka cilladaha, sidaa darteed way iska ilaalin kartaa guuldarooyinka waaweyn ee dambe. Ka takhalusida cilladahan sida ugu dhaqsaha badan waxay kaa badbaadin kartaa waqti iyo kharash badan
5.Quick PCPC shirkii leexo-Waad dalban kartaa noocyada PCB. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad soo gudbiso naqshadda PCB oo aad hesho natiijooyinka.
6.Shambal tijaabo ah kahor intaan si buuxda wax loo soo saarin - Waxaan kuu oggolaaneynaa inaad tijaabiso looxyada noocyada ah isla markaana aad xaqiijiso inay u shaqeeyaan sidii loogu baahdo iyo in kale.
Awoodda shirkii PCB:
Dusha sare (SMT)
Iskujir SMT & THT
Meelayn Hal ama Laba Gees ah
BGA iyo in ka badan
Macluumaadka Loo Baahan Yahay PCBA:
Hoos waxaa ku yaal liiska elektiroonigga iyo alaabooyinka la xiriira ee lagama maarmaanka u ah shirarka guddiga wareegga daabacan:
• Guddiga Wareegga Daabacan (PCB)
• Qayb koronto ah sida resistors.
• Qalabaynta walxaha sida siligga, preform, bar, qulqulka iyo Jinka.
• Qalabaynta qalabka sida mashiinka dhejinta, mowjadaha dusha sare, SMT-Stencil, qalabka dhejinta iyo qalabka baaritaanka iwm.
Tan iyo markii PCBFuture la aasaasay, waxaan la shaqeynay shirkado badan oo gudaha iyo dibedda ah fikradda ah tayada ugu horreysa iyo macmiilku waa ilaah oo helay caan caan ah. Waxaan kasbannay kalsoonida iyo taageerada shirkadaha ka socda in ka badan 40 waddan oo leh qiimo tartan, badeecooyin tayo wanaagsan leh iyo adeeg aad u wanaagsan.
Haddii aad wax su'aalo ah ama su'aalo ah qabtid, si xor ah ula xiriir sales@pcbfuture.com , waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa ASAP.